COVID- 19 နဲ့ပတ်သက်လို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာမလွန်းထားထား(ဆေးတက္ကသိုလ်) | Akonthi
COVID- 19 နဲ့ပတ်သက်လို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာမလွန်းထားထား(ဆေးတက္ကသိုလ်)
လက်ရှိအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့စာရေးဆရာမ လွန်းထားထား(ဆေးတက္ကသိုလ်)က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံကအခြေအနေတွေကိုပြောပြခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကျန်းမာရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့အတွက် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အကုန်သိသတင်းဌာနက စာရေးဆရာမလွန်းထားထားကို အွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“ မနေ့ညကသန်းခေါင်ယံအချိန်ကနေစပြီးတော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို Lock Down လုပ်လိုက်ပါပြီ။ အဲဒီအတွက် ကျွန်မတို့အားလုံးအိမ်ထဲကအိမ်အပြင်မထွက်ဘဲအိမ်ထဲမှာပဲနေရပါမယ်။ မသွားမဖြစ် မထွက်မဖြစ် အလုပ်လုပ်ရမယ့်သူကတော့ ဆရာဝန်တွေ၊ သူနာပြုတွေနဲ့ From Line Worker တွေ? သူတို့ကလွဲပြီးတော့ ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးအိမ်ထဲမှာပဲနေရပါမယ်။ မနေ့ကစပြီးတော့ အ၀တ်အထည်ဆိုင်တွေ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်တွေ၊ ဆိုင်တွေအကုန်လုံးနဲ့ ဟိုတယ်တွေ၊ စာကြည့်တိုက်တွေ၊ အားကစားစင်တာတွေ အကုန်လုံးပိတ်ရမယ်လို့ အစိုးရကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အဓိကကအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဆိုင်တွေကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ဆိုင်တွေအကုန်လုံးကိုပိတ်လိုက်ပါပြီ။ အခုတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေမှာ လူတိုင်းကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်” လို့ စာရေးဆရာမလွန်းထားထားက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်း အခုလိုပဲ ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“အခုလိုအချိန်မှာ ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကနေအိမ်မှာနေထိုင်ပြီး ကိုယ်တိုင်မဖျားစေဖို့နဲ့ အကယ်၍ ကိုယ်ကနေမကောင်းဖြစ်ဖျားတယ်ဆိုလည်း နေအိမ်မှာနေထိုင်ပြီးတခြားသူတွေဆီကိုမကူးစက်စေဖို့ သီးခြားနေထိုင်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ နေအိမ်မှာနေထိုင်ဖို့နဲ့ လက်ကိုနည်းစနစ်တကျဆေးဖို့ကအထူးအရေးကြီးပါတယ်” လို့ သူမက ဆိုပါတယ်။
ဗြိတိန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ Covid- 19 ကူးစက်သူဦးရေဟာ ၈၀၀၀ ဦးကျော်ရှိလာပြီး သေဆုံးသူဦးရေကတော့ ၄၂၂ ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လက်ရှိအထိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (ခေါ်) COVID-19 ပိုးတွေ့ရှိသူဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၃)ဦးရှိနေပြီးဖြစ်ကာ ဝေဘာဂီ ဆေးရုံမှ (၁) ဦး၊ ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ (၁)ဦးနဲ့ အင်းစိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ (၁) ဦးတို့ဖြစ်ပါတယ်။
အိဖြူသိမ့် ( အကုန်သိ သတင်းဌာန )
လကျရှိအင်ျဂလနျနိုငျငံမှာနထေိုငျနတေဲ့စာရေးဆရာမ လှနျးထားထား(ဆေးတက်ကသိုလျ)က ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈနဲ့ပတျသကျပွီး အင်ျဂလနျနိုငျငံကအခွအေနတှေကေိုပွောပွခဲ့ပွီး မွနျမာနိုငျငံသားတှအေားလုံးကနျြးမာရေးကိုအထူးဂရုစိုကျကွဖို့အတှကျ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
ဒီအကွောငျးအရာတှနေဲ့ပတျသကျလို့ အကုနျသိသတငျးဌာနက စာရေးဆရာမလှနျးထားထားကို အှနျလိုငျးကနတေဈဆငျ့ ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
“ မနညေ့ကသနျးခေါငျယံအခြိနျကနစေပွီးတော့ အင်ျဂလနျနိုငျငံကို Lock Down လုပျလိုကျပါပွီ။ အဲဒီအတှကျ ကြှနျမတို့အားလုံးအိမျထဲကအိမျအပွငျမထှကျဘဲအိမျထဲမှာပဲနရေပါမယျ။ မသှားမဖွဈ မထှကျမဖွဈ အလုပျလုပျရမယျ့သူကတော့ ဆရာဝနျတှေ၊ သူနာပွုတှနေဲ့ From Line Worker တှေ? သူတို့ကလှဲပွီးတော့ ကနျြတဲ့သူတှအေားလုံးအိမျထဲမှာပဲနရေပါမယျ။ မနကေ့စပွီးတော့ အဝတျအထညျဆိုငျတှေ၊ လြှပျစဈပစ်စညျးဆိုငျတှေ၊ ဆိုငျတှအေကုနျလုံးနဲ့ ဟိုတယျတှေ၊ စာကွညျ့တိုကျတှေ၊ အားကစားစငျတာတှေ အကုနျလုံးပိတျရမယျလို့ အစိုးရကအမိနျ့ထုတျပွနျလိုကျပါတယျ။ အဓိကကအစားအသောကျနဲ့ ဆေးဆိုငျတှကေလှဲလို့ ကနျြတဲ့ဆိုငျတှအေကုနျလုံးကိုပိတျလိုကျပါပွီ။ အခုတှကွေုံ့နရေတဲ့အခွအေနမှော လူတိုငျးကစိုးရိမျပူပနျမှုတှအေမြားကွီးရှိနပေါတယျ” လို့ စာရေးဆရာမလှနျးထားထားက ပွောပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကာကှယျနိုငျဖို့အတှကျကိုလညျး အခုလိုပဲ ဆကျလကျပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
“အခုလိုအခြိနျမှာ ကြှနျမတို့ပွညျသူတှအေနနေဲ့ကနအေိမျမှာနထေိုငျပွီး ကိုယျတိုငျမဖြားစဖေို့နဲ့ အကယျ၍ ကိုယျကနမေကောငျးဖွဈဖြားတယျဆိုလညျး နအေိမျမှာနထေိုငျပွီးတခွားသူတှဆေီကိုမကူးစကျစဖေို့ သီးခွားနထေိုငျဖို့တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ အဓိကအရေးကွီးတာကတော့ နအေိမျမှာနထေိုငျဖို့နဲ့ လကျကိုနညျးစနဈတကဆြေးဖို့ကအထူးအရေးကွီးပါတယျ” လို့ သူမက ဆိုပါတယျ။
ဗွိတိနျကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနရဲ့ထုတျပွနျခကျြအရတော့ Covid- 19 ကူးစကျသူဦးရဟော ၈၀၀၀ ဦးကြျောရှိလာပွီး သဆေုံးသူဦးရကေတော့ ၄၂၂ ဦးအထိရှိလာပွီဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ လကျရှိအထိ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ (ချေါ) COVID-19 ပိုးတှရှေိ့သူဓာတျခှဲအတညျပွုလူနာ (၃)ဦးရှိနပွေီးဖွဈကာ ဝဘောဂီ ဆေးရုံမှ (၁) ဦး၊ ခငျြးပွညျနယျ တီးတိနျပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးမှ (၁)ဦးနဲ့ အငျးစိနျပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးမှ (၁) ဦးတို့ဖွဈပါတယျ။
အိဖွူသိမျ့ ( အကုနျသိ သတငျးဌာန )
အမြိုးသားသှေးဌာန(ရနျကုနျ)တှငျ သှေးလိုအပျခကျြရှိနပွေီး ည ၇ နာရီအထိသှေးလှူဒါနျးနိုငျရနျ အခြိနျတိုးမွှငျ့ပေးထားကွောငျး သိရသညျ။
အသွားအလာ ကန့်သတ်ခံရသူများ စည်ကမ်းမလိုက်နာပါက တည်ဆဲဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက် တာ မြင့်ထွေးပြော
ပြည်ပမှ ပြန်လာသူများကို နေအိမ်တွင်ဖြစ်စေ၊ သတ်မှတ်ထားသည့် စောင့်ကြည့်နေရာများတွင်ဖြစ်စေ အသွားအလာ ကန့်သတ် ၍ စစ်ဆေးခြင်းခံယူရန် ညွှန်ကြားမှုများကို မလိုက်နာပါက တည်ဆဲဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားက စား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ပြောကြားလိုက်သည်။
“ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိရင်လူထုကလက်တစ်လုံးခြားချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်။ဒါမျိုးကိုတော့စံပြအဖြစ်အရေးယူသွားမှာပါ“ လို့ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီး (ညွှန်ကြားရေးမှူး) ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှခုလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုက်ကူး - အံ့ညီညီ